Eritrea oo 10 qodob oo xasaasi ku eedeysay dalka Qatar | Xaysimo
Home War Eritrea oo 10 qodob oo xasaasi ku eedeysay dalka Qatar
Eritrea oo 10 qodob oo xasaasi ku eedeysay dalka Qatar
Xiisad xooggan ayaa ka dhex dillaacay Qatar iyo Eritrea oo ah laba ka mid ah dalalka xulafada la ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Wasaaradda warfaafinta Eritrea ayaa qoraal ay maanta oo khamiis ah soo saartay waxa ay ku eedeysay Qatar in dalkooda ka waddo kicin dadweyne, khaarijin, dhibaateyn dhaqaale, iyo kharbudaad dhinac walba ah.
Wasaaradda ayaa soo bandhigtay 10 dhibaato oo ay sheegtay in Qatar ay ku hayso Eritrea, kuwaas oo kala ah:
1 – Inay dib isugu abaabushay hogaamiyayaasha mucaaradka Eritrea, mideysay ururadooda, islamarkaana ay siisay taageero lagama maarmaan u ah.
2 – In ay si gaar ah diiradda u saartay dhallinyarada Eritrea, mideyday ururadooda, islamarkaana kicisay si ay uga qeyb qaataan ficillo kacdoon oo ka dhan ah dowladda Eritrea.
3 – Inay xagjirnimo diimeed ku beertay mucaaradka Islaamiyiinta ah ee Eritrea, sidaas darteedna ku dhiiri-gelisay Musilimiinta Eritrea inay qaadaan kacdoon ka dhan ah muwaadiinta kale.
4 – Inay kala qeybsanaan jinsiyeed iyo naceyb ku dhex beertay shacabka Eritrea.
5 – Inay billowday dadaal ay ku dhiirigelineyso dibad-baxyo ka dhan ah dowladda Eritrea oo ka dhaca magaalooyinka dalkaas.
6 – Inay tababar Militari gudaha dalka Sudan ku siisay xubno mucaarad ah oo ka tirsan kooxda Ikhwaanul Muslimiin, tababarkaas oo ku saabsan sida loo aaso miinooyinka, loo fuliyo weerarada ku dhufo oo ka dhaqaaq ah, iyo dilalka qorsheysan ee ka dhanka ah saraakiisha dowladda ee caanka ah, ayna fududeysay sidii xubnaha loo soo gelin lahaa dalka Eritrea, si ay u fuliyaan howl-galladooda.
7 – Inay khaarijisay hoggaamiyayaal saameyn leh oo Eritrean ah.
8 – Inay Eritrea ka fulisay ficillo lagu wiiqayo dhaqaalaha Eritrea.
9 – Inay sare u qaaday dacaayad cadaawad ku dhisan oo ka dhan ah Eritrea.
10 – Inay xadgudubyada xuquuqda aadanaha Eritrea ka buun-buunisay ururada caalamiga ah iyo dalal shisheeye, ayna u adeegsatay baahinta dukumentiyo iyo muuqaalo been abuur ah.
Qatar ayaa horey sidan oo kale waxaa taageeridda argagixisada ugu eedeeyey dalalka Sacuudiga, Imaaraadka, Masar iyo Bahrain, kuwaas oo xiriirka u jaray.
Madaxweyne Farmaajo wuu diiday markaas inuu xiriirka u jaro Qatar, maadaama la rumeysan yahay inay ka dambeysay inuu ku guuleysto doorashadii 2017.
Si kastaba, xiisaddan cusub aya aku qasbi karta inuu dhan raaco.